Governemanta: Nesorina i Pr Ahmad Ahmad sy Irmah Lucien Naharimamy
jeudi, 20 août 2020 18:45
Nasiam-panovana ny mpikambana sasany ao amin’ny Governemanta. Nosoloina ny roa, nofenoina ny toerana banga. Nisy ministera nozaraina roa.
Nesorina tsy ho mpikambana ao amin’ny Governemanta Ntsay Christian i Pr Ahmad Ahmad, nisahana ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka. Nesorina ihany koa i Irmah Lucien Naharimamy, tao amin’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy.
Ny taratasy fanairana nosoratany tamin’ny 20 jolay 2020 sy miantso tolotanana amin’ireo mpiara-miombon’antoka hiadiana amin’ny Covid-19 no heverin’ny maro ho antony nanilihana an’i Pr Ahmad Ahmad.
Noho i Irmah Lucien Naharimamy nanambady diplaomaty vahiny kosa no mety nanesorana azy tao anaty governemanta.
Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis, no voatendry ho minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Mpandidy momba ny tratra izy, efa nitana andraikitra samihafa teo anivon’ny CHU HJRA, sy ministera ihany koa.
Michelle Bavy Angelica, depiote IRD voafidy tao Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjirofo, ary filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Faritany Toamasina no voatendry ho minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy.
Nozaraina roa ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak’asa. Banga hatramin’ny jona 2020 ny toeran’ny minisitra tao, taorian’ny fametraham-pialana ka nanesorana an’i Rijasoa Iarintsambatra Andriamanana Josoa.
Notendrena hisahana ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena i Sahondrarimalala Marie Michelle. Mpitsara sady dokotera ihany koa ity farany. Tale (Études Juridiques) teo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika izy, mpiara-miasa akaiky amin’ny filoha Andry Rajoelina.
Tsikeliankina Ernest kosa no notendrena ho Minisitry ny fampianarana teknika sy fanofanana arak’asa. Efa nisahana andraikitra ambony momba ny fampianarana teknika sy fanofanana arak’asa ity farany.
Nampahafantarina androany tolakandro teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ireo minisitra efatra vaovao ireo, ary niatrika avy hatrany filankevitry ny minisitra mifanatri-tava, notarihin’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina.
Fanin’efany amin’ity androany ity izao no nikitihana ny governemanta. Ny 24 janoary 2019 no nijoro ny governemanta voalohany tao anatin’izao fitondrana Andry Rajoelina izao, 19 jolay 2019, ary tamin’ny 29 janoary 2020 ny fanovana farany.
Notazomina hatrany ho praiminisitra lehiben’ny governemanta hatrany i Ntsay Louis Christian.
Niampy iray ka lasa 25 ny isan’ny ministera, raha 24 tamin’ny 29 janoary 2020 nisy fanovana mambra ny governemanta farany. Miampy iray ka lasa fito ambin’ny folo (17) ny isan’ny lehilahy minisitra, raha toa ka mijanona ho valo (08) ny isan’ny vehivavy minisitra ao anaty governemanta.